Cabdi Xaashi: Madaxweyne Farmaajo ayaa iga hor istaagay shirka Dhuusamareeb – Kalfadhi
Cabdi Xaashi: Madaxweyne Farmaajo ayaa iga hor istaagay shirka Dhuusamareeb
February 3, 2021 Hassan Istiila
Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo in uusan qaddarin waajibaadka dastuurka uu siiyay Aqalka Sare.
“Aqalka Sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya sida uu dastuurka qaranka sheegayo.. waa wakiilka dowlad goboleedyada,waa ilaaliyaha nidaamka federaalka ee dalkan”
Wuxuu sheegay in madaxweynaha Dawladda Federaalka uu ka hor istaagay inuu ka qaybgalo shirka maanta madaxda Dawladda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada uga furmay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug.
“Waxaa kale uusan aqoonsaneyn oo ay caddeyneysaa diidmada uu ii diidayo shirkaa Dowlad Goboleedyada iyo Dowladda Dhexe ay ku shirayaan oo Aqalkan uu yahay xiriiriyihii”
“Waxaan ka xumahay muddadaa uu jiray Aqalka Sare in madaxweyna uusan aqoonsanin tixgelinin waajibaadkaa dastuuriga ah ee dastuurka siiyay Aqalka Sare, khilaaf kasta iyo wadahadal kasta oo dhexmara dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada.
” Aqalkaasi in uu yahay midka shirarkaas muhiimad gaar ah ay ka saaran tahay oo dhexdhexaadiye ah” ayuu yiri Cabdi Xaashi oo goordhaweyd shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho.
Hadalka guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa kusoo beegmayaa xilli Dhuusamareeb madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Dowladda Federaalka uu uga furmay kul looga hadlayo muranka harreeyay hanaanka doorashada Soomaaliya. BBC Somali ayaa warkan markii hore lagu daabacay.
Madaxweyne Farmaajo oo guddoomiyey furitaanka shirka wadda-tashiga doorashooyinka
Baarlamaanka Puntland oo maanta ansixiyay hindise-xeereedka diiwaan-gelinta cod-bixiyaha